आमिर खानका बहुचर्चित ८ गेटअप (फोटोफिचर) - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
आमिर खानका बहुचर्चित ८ गेटअप (फोटोफिचर)
मुम्बई ३० फागुन
बलिउड फिल्ममा फरक–फरक भूमिकामा सफल अभिनय गर्ने अमिर खान आज (मार्च १४) आफ्नो ५४ औँ जन्मदिन मनाउँदैछन्।
बलिउडमा सुपरस्टार रहेका आमिरको समकक्षीभन्दा फरक पहिचान छ। कम सिनेमा र फरक अनि स्मरणीय गेटअप उनको मुख्य विशेषता हो। लामो समयपछि रिलिज हुने उनको फिल्म हरेक पटक फ्यानका लागि विशेष रहन्छन्।
आमिर पनि फिल्ममा निकै मेहनत गर्छन् र फ्यानको आशा र भरोसालाई मर्न दिँदैनन्। त्यसैले पनि उनी बहुप्रतिभाशाली छन्। आफ्ना हरेक फिल्ममा फरक–फरक गेटअपमा देखिन्छन्। उनको शरीर, हेयरस्टाइल, स्कीनमात्र होइन शारीरिक हाउभाउ पनि फरक रहन्छ। त्यसैले उनलाई बलिउडका बहुरुपी हस्ती भन्दा फरक नपर्ला। चर्चा गरौँ यिनै हस्तीको सबैभन्दा चर्चित ८ भूमिका र गेटअपः
१. ट्याटू म्यान ‘गजनी’
फिल्म ‘गजनी’मा आमिरले शरीरभरी ट्याटु खोपाएका थिए । साथै उनको टाउकोमा चोटको निशानसमेत थियो। फिल्म नाम नै यही पात्रको नामबाट राखिएको थियो। आमिरको यस फिल्मले राम्रो चर्चामात्र पाएन उनको गेटअपको पनि निकै तारिफ भयो। कतिपय त रनभुल्लमा समेत परे।
२. सोझो भुवन
फिल्म ‘लगान’ आमिरको फरक भूमिकामा रहेको अर्को फिल्म हो। जहाँ उनले भुवनको भूमिका निभाएका छन्। फिल्ममा उनको अभिनयलाई हेर्दा उनी साँच्चिकै कुनै गरिब किसानको घरमा जन्मिएको र त्यहीँ आफ्नो जीवन जिइरहेको जस्तो देखिन्छ। भुवनको सोझोपनले धेरैको मन जित्न सफल भएको थियो र आज पनि सो फिल्ममा आमिरको भूमिकाको उत्तिकै चर्चा छ।
३. अग्रदूत ‘मंगल पाँडे’
प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अग्रदूत मंगल पाँडेको बायोपिक फिल्ममा आमिरले ‘मंगल पाँडे’को भूमिका निभाएका थिए। आमिरको जुँगा र आँखामा देखिएको आवेग हेर्न लायक थियो। फिल्मले दर्शकको त्यति धेरै माया पाउन नसके तापनि आमिरको भूमिकाको चौतर्फी तारिफ भयो। फिल्ममा उनलाई मृत्युदण्ड दिँदाको क्षण सम्झँदा आज पनि धेरैको आँखामा आमिर नाच्छन्।
४. एलियन वाला ‘पीके’
फिल्म ‘पीके’को पोस्टर बाहिर आउनसाथ यसले राम्रो चर्चा कमाएको थियो। फिल्ममा आमिर एलियन जस्ता देखिन्छन्। उनका लामालामा कानमा धेरैको ध्यान गएको पाइन्छ। फिल्ममा उनको गेटअपलाई लिएर पनि निकै चर्चा भएको थियो। उनी एउटै फिल्ममा फरक–फरक भूमिकामा देखिएका थिए।
५. पुलिसवाला आमिर
‘तलाश’ आमिरको अर्को चर्चित फिल्म हो। जसमा उनी एक पुलिस इक्स्पेक्टरको भूमिकामा देखिएका छन्। यसभन्दा अघि उनी ‘सरफरोश’ मा पुलिसको भूमिकामा नदेखिएका होइनन्। तर, दुवै भूमिकामा उनले एक अफिसर र इक्स्पेक्टरवाला भूमिका फरक–फरक तरिकाले निभाएका छन्। प्रहरीको गेटअपमा आमिर निकै खुलेका र गम्भीर देखिएका थिए।
६. शक्ति कुमार बन्दा
२०१७ को चर्चित फिल्म ‘सीक्रेज सुपरस्टार’मा आमिर खान संगीतकार शक्ति कुमारको भूमिकामा देखिन्छन्। फिल्ममा आमिरको शारीरिक र अनुहारको भावले धेरैलाई हँसाउँछ। साथै, फिल्ममा आमिरको कपडा, कपाल, दाह्री–जुँगा लगायतका गेटअप पनि भूमिका सुहाउँदो छन्।
७. शरीर नै परिवर्तन
फिल्म ‘दंगल’मा आमिर फोगाट परिवारको मुख्य व्यक्ति महावीर फोगाटका रुपमा देखिएका थिए। यस भूमिकाका लागि उनले आफ्नो शरीरको तौल नै बढाएका थिए। उनले आफ्नो तौल १०० किलो बनाएका थिए।
गत वर्ष आएको आमिरको फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दूस्तान’मा आमिरले घुमन्तेको भूमिका निभाएका थिए। फिल्म धेरै नचले पनि आमिरको भूमिकाको भने निकै तारिफ भएको थियो। फिल्ममा उनी गधामा सवार दृश्य हेर्न लायक थियो। उनको जुँगा, कपाल, पहिरन लगायतको गेटअप निकै फरक खालको थियो। फिल्ममा उनी विदेशीजस्ता देखिएका थिए।
प्रकाशित ३० फागुन २०७५, बिहिबार | 2019-03-14 14:06:25